Archive du 20171122
Ry dedaka isany
Salama ra jean a ! Hitako finaritra ery ianareo ry jean mahita ny anaranareo amin’ilay trano notokanana tany amin-dry besisika omaly iny a
Amboasary Gara Moramanga Mitady hanjaka ny gaboraraka
Anisan’ireo tanàna mandroso eto Madagasikara ny tanànan’Amboasary Gara kaominina Amboasary Gara distrikan’i Moramanga Faritra Alaotra Mangoro.
Tsena COUM 67 Ha Misy mitady hanakorontana
Misy mitady hanakorontana ny tsena etsy amin’ny Coum 67 ha. Mifandramatra ny samy mpivarotra mampiasa ny sisin-dalana eo am-pitan’ny toby fiantsonan’ny taksibe 119 izay marihina fa vao nisy vehivavy iray naratra indray omaly maraina.
NY AMPINGA Manomana mpikabary afaka miasa avy hatrany
Efa enin-taona sahady ankehitriny no nijoroan’ny Ampinga, fikambanana iray mampianatra kabary maimaimpoana tarihin’ny filoha mpanorina azy Atoa Mitahirifahendrena.
Malaza indray ny zava-misy any Zimbabwe amin’izao fotoana izao noho ny filavoana lefona nataon’ny filoha Robert Mugabe,
Fokontany Antanambao Ivato Hahazo EPP vaovao
Mitohy hatrany ny fananganana fotodrafitrasa ao anatin’ny kaominina Ivato amin’izao, tarihin’ny Ben’ny tanàna Penjy Randrianarisoa. Notanterahina omaly indray ny hady fototry ny EPP vaovao ao amin’ny fokontany Antanambao.